Very 3 200 000 Ariary tany Foulpointe ireto mpanao vacances ireto • Madagossip
il y a 2 années 2.4 K
Very ny 3 200 000 Ariary
Raha nikasa ny hanao vakansy mahafinaritra tany Foulpointe ireto mpianakavy kely, dia sendran’izay olon-dratsy ka very ny 3 200 000 Ariary. Ny alin’ny Alatsinainy 28 aogositra teo mantsy dia nisy namaky ny bungalow nipetrahan’ireto olona ireto ka very tao ny vola saika ampiasaina amin’ny fialan-tsasatra.
Araka ny nambaran’ireo niharam-boina, tsy nisy naheno izy ireo tao amin’ny bungalow nefa dia teo an-doham-pandriana ny poketra. Rehefa azon’ireo olon-dratsy izay nilainy dia naparitak’izy ireo eran’ny tokotany avokoa ny telephone, tablette, fakan-tsary sns. Araka ny nambaran’ireo niharan-doza hatrany, toerana mba azo lazaina ho tsara ihany ity toerana nipetrahan’izy ireo ity, ary misy mpiambina. Saingy mamo be ilay gardien tamin’io fotoana io.
Tsy vitan’izany fa rehefa niantso ny tompon’ny tanàna izy ireo dia mbola izy ireo ihany koa no nahazo tsiny. Nampilazana moa ireo mpitandro filaminana teny an-toerana saingy toa tsy nahenoina tohiny ny toe-draharaha. Kivy tanteraka ireo mpanao vacances manoloana izany.
Manjaka ny tsy fandriampahalemana any Foulpointe, ary efa maromaro ihany ireo mpanao vacances voaendaka sy vaky trano tany tamin’ity taona ity. Ny mahagaga dia toa tsy dia rototra ireo mpitandro filaminana sy ny Fanjakana… Miady irery ny olona manoloana ireo asan-dahalo etsy sy eroa, tsy any Foulpointe irery fa amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy. Sao dia tokony asiana fandinihana fa efa maro loatra izay olona very fananana sy maty noho ny tsy filaminana izay.
Famantarana 10 milaza fa tokony handeha hiala sasatra ianao: mila vacances
Efa raikitra indray ny tandrevaka ho an’ireo taxi-brousse mankany Mahajanga
A vous la parole/Voyage	il y a 2 années
Tsy misy raisina intsony ny lalana mankany Foulpointe. Ato ny sary
Tatasika/Voyage	il y a 2 années